पुरुषका लागि कपाल कपाल | स्टाइलिश पुरुषहरू
पुरुषका लागि कपाल कपाल
एलिसिया टोमेरो | | व्यक्तिगत हेरचाह, कपाल शैली, प्रचलनहरू
पुरुषका लागि कपाल कपाल धेरै व्यक्तिगत कपालका स्टाइलहरू हुन् जुन उनीहरू मनपराउँदछन् र ग्रीष्मकालको तापक्रमको लागि उत्कृष्ट छन्। उसको शैली सिनेमा, एथलीटहरू वा गायकहरूको सबैभन्दा क्यारिज्म्याटिकबाट प्रभावित छ र वर्षौं बित्यो पनि एक प्रवृत्ति सेट गर्न जारी रहन्छ।
यो कपाल काट्ने सँधै मूल्यवान छ जो आफ्नो व्यक्तित्व चिह्नित गर्न को लागी, किनकि हेडको माध्यमबाट मेशीन पार गर्नु अघि, तपाईंले मूल्या assess्कन गर्नुपर्नेछ कि तपाईंको टाउको ढाँचाहरू र फिजिएग्नॉमी भित्र पर्छ कि यसले त्यसलाई दाढी गर्न सक्छ।
त्यसकारण, तपाईंले अन्तस्करणको जाँच गर्नुपर्नेछ यो जान्नको लागि कि यो तपाईंको शैली हो। धेरै पुरुषहरू यो जीवनको मनोवैज्ञानिक परिवर्तनहरूद्वारा केशको साथ सहज र व्यावहारिक महसुस गरेर वा कुनै प्रकारको चरण बन्द गरेर यो कटौतीको निर्धारण गर्न आएका छन्।
1 पुरुषका लागि कपाल कपाल
1.1 कुल शेवि
1.2 ढाँचाको साथ कपाल कपाल
1.3 चीरा, पट्टि वा चित्रका साथ सेभ गरिएको
1.4 दाह्री संग टाउको
1.5 सेभ गरिएको अन्डरकट
1.63वा level चरणमा कपाल कपाल
2 घरमा कपाल कपाल कसरी पाउने?
यदि तपाईंले यस प्रकारको कटौती गर्न तपाईंको दिमाग पार गर्नुभयो भने, तपाईंलाई यो बुझ्नुपर्दछ कि केवल दाह्री खौरन मात्र होइन। दाह्री कपाल बिभिन्न स्टाइलमा बनाउन सकिन्छ र यहाँ हामी तपाईलाई प्रयोग गर्न सक्ने बिभिन्न विकल्पहरु देखाउन सक्छौं।
पूर्ण शेवि। क्लासिक र गर्न को लागी सजिलो हो। यो तपाइँको स्टाइलिस्टको सहयोगमा गर्न सकिन्छ वा आफैले कपाल काट्नको लागि विशेष रेजरको सहायताले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दा आमूल परिवर्तनका लागि वा ग्रीष्म forतुको लागि यो टाउको टक्कै समस्या भएका पुरुषहरूको लागि धेरै चापलुसी छ।
ढाँचाको साथ कपाल कपाल
यो कपाल यो केश शैली संग हिम्मत गर्नेहरूका लागि आदर्श हो, शीर्षमा केश छोड्दै, यस तरिकाले "अण्डा टाउको" प्रभाव हटाइन्छ। यो केश गर्न तपाईं रेजरको साथ धेरै सटीक हुनुपर्दछ शीर्ष र टाउकोको पक्षहरूको बीचमा सटीक असमानता कायम गर्न। यो मुंडा कपाल धेरै रमणीय छ र धेरै व्यक्तित्वसँग मेल खान्छ।
चीरा, पट्टि वा चित्रका साथ सेभ गरिएको
यो केश शैली युवा, आकर्षक र ताजाताको स्पर्शको साथ छ।। हामीले कपालमा हामीले कपाल गरेको कपालमा कपाल कपालमा लगाउनु पर्छ, जुन दाह्री खौरिए पछि। आफ्नो गिरावट को प्रत्येक पक्ष मा छ जब चीरा वा पट्टिहरू बनेका छन्, दुबै पक्ष बिचको छुट्टि चिन्ह लगाउन। रेखाचित्र टाउकोको छेउमा वा पछाडिको निपट्टि माथि बनाउन सकिन्छ।
दाह्री संग टाउको
मुंडा कपाल र बढेको दाह्रीको संयोजन यो एक यस्तो नजर हो जुन सबै शैली र व्यक्तित्वका लागि आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो कपाल तीन-दिन दाह्रीको साथ संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ वा धेरै लामो दाढीको साथ, यो एकदम बाक्लो दाह्रीको साथ उत्तम हुन्छ। उसको मिश्रणले त्यो रूख र गम्भीर दृश्य दिन्छ र यो उत्तम हुनको लागि यो राम्रो हुन्छ कि तपाईको साइडबर्नहरू राम्रो हातले पेशेवरले नराम्रो मान्नु पर्छ।
सेभ गरिएको अन्डरकट
यो कपाल काट्ने धेरै नजिक छ, लगभग दाह्री र सबै कपाल प्रकारको लागि आदर्श। यो लगाउने तरिका हो टाउको को पक्षहरु धेरै कपाल छोड्दै र माथिल्लो भाग यसलाई हल्का लामो छोडेर, त्यो अर्थपूर्ण अन्डरकट शैलीको साथ। दुबै तह बीचको तपाइँको मार्कहरू गिरावट वा ठूलो कटौती गर्न सकिन्छ, गिरावट बिना।
3 वा level चरणमा कपाल कपाल
यो मुंडा शैली ती मानिसहरु जो आफ्नो कपाल एकदम छोटो लगाउन चाहानुहुन्छ, तर कूल दाढीमा नपुग्दै। यो सबै ती मानिसहरूसँग सुरू गर्न आदर्श छ जसले आफ्नो कपाल हराउन सुरू गर्दछ र छोडिन्छ दुबै तहमा, and र between बीचमा, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने माथिल्लो भाग थोरै लामो छोडेर।
घरमा कपाल कपाल कसरी पाउने?
यो कुनै fuss, उपद्रव मुक्त केश प्राप्त गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो तरीका हो। तपाईंसँग राम्रो सेभिंग मेशिन हुनुपर्दछ, कि तपाइँको कपाल को मोटाई संग र यो छिटो र तान्न बिना गर्दछ।
तपाइँ केवल १० मिनेटमा तपाइँको कपाल दाढी गर्न सक्नुहुनेछ मद्दतको आवश्यकता बिना नै स्वदेशी रूपमा गर्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो स्वादको आधारमा स्तर छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, या त स्तर १, २, and र 1 मा पनि, जुन तपाईं अझ धेरै प्राकृतिक र गोल समाप्त गर्नुहुन्छ।
तपाईं रेजर प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ छेउमा र तलबाट कपाल काट्दै, रेजरले गर्नको लागि गति मा चिकितो चालहरु बनाउँदै। त्यसोभए तपाईं पछाडि जारी राख्न सक्नुहुन्छ मुकुटमा पुग्दासम्म।
माथिल्लो भाग गर्न पनि सजिलो छतपाईंले निधारमा शुरू गर्नुपर्नेछ र काटिएको पछाडि कंघी गर्नुपर्छ। यसलाई माथि उठाउनको लागि, तपाईंले पूरै टाउकोमा दोस्रो पास बनाउनुहुन्छ जबसम्म तपाईं सुन्नुहुन्न कि रेजरले तपाईंको कपाल काटिरहेको छ।
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने दुई उचाइमा दाह्री बनाउनुहोस्, पक्षमा पूर्ण शेविंग र शीर्षमा लामो कपालको साथ, पहिले तपाईंले आफ्नो कपाल पूर्णतया दाढी गर्नुपर्दछ जुन तपाईं माथिल्लो भाग छोड्दै हुनुहुन्छ।
पक्षहरु पछि तपाईले गर्नु पर्छ तिनीहरूलाई एक वा दुई तह कम गर्नुहोस् तपाईंले शीर्षमा प्रयोग गर्नुभएको संख्या भन्दा। तपाईंले स्पष्ट रूपमा ब्रान्डको कल्पना गर्नुपर्दछ जहाँ तपाईं दुई भागहरू गिराउन लाग्दै हुनुहुन्छ, बायाँसँग दायाँ भाग मिल्दछ।
यस क्षेत्रलाई अमान्य पार्न तपाईंले यसलाई सावधानी र धैर्यताका साथ गर्नुपर्दछ, छोटो स्ट्रोक मा रजरको प्रयोग गरी र अलि अलि गर्दै। आफैलाई केही ऐनाको साथ मद्दत गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईंसँग उत्तम कट छ। यदि तपाईले टाउको कपाल गर्ने उत्तम तरिका जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाई एउटा पढ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पोष्ट, जहाँ हामी यसलाई तपाईलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषका लागि कपाल कपाल
एक झुम्का प्राप्त गर्न कति खर्च हुन्छ?
पुरुषहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो गर्मी लुक